Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.6.1 maqalka weydiinaya
Isku xirka aad sahanka inay raad digital noqon kartaa sida qof kasta weydiinaya su'aalo aad at times oo dhan.
Waydiinta guud ahaan ka kooban yahay laba qaybood oo waaweyn: sahan muunad iyo tirakoobyadu. sahan Sample, halkaas oo aad ka heli tiro yar oo ah dadka, dabacsanaan, waqtiga, iyo cheap xad karo. Si kastaba ha ahaatee, sahan muunad, sababta oo ah waxay ku salaysan yihiin muunad, waxaa inta badan ku koobnayn in ay xal; la sahanka tusaale, inta badan waa adag tahay in la sameeyo qiyaas ku saabsan gobollada juqraafi gaar ah ama kooxo gaar ah dadka. Tirakoobyadu, oo dhinaca kale ah, isku dayaan in ay waraysi qof kasta oo dadka. Waxay leeyihiin xallinta weyn, laakiin waxay guud ahaan u qaali ah, cidhiidhi ah in diiradda yihiin (inay uun ka mid ah tiro yar oo su'aalo ah), iyo ma ku habboon (waxay ku dhici on jadwal go'an, sida 10 sano oo kasta) (Kish 1979) . Haddaba qiyaasi haddii cilmi-isku yaabaa sifooyinka ugu wanaagsan ee sahan muunad iyo tirakoobyadu; qiyaasi haddii cilmi maalin walba su'aal kasta weydiisan kartaa in qof walba.
Sida iska cad, oo joogtada this, xoojisay, had-on sahan waa nooc ka mid ah khiyaali ah cilmiga bulshada. Laakiin, waxa ay u muuqataa in aanu bilaabi karaan in this qiyaasi by isku su'aalo sahan ka tiro yar oo ah dadka la raad digital ka dad badan. Waxaan ugu baaqayaa noocan ah isku darka maqalka weydiinaya. Haddii si wanaagsan loo sameeyo, waxa caawin kara na siisaa qiyaasta kuwa badan oo maxali ah (meelaha juqraafi yar), granular ka badan (ee kooxaha dadka gaarka ah), iyo in ka badan waqtiga.
Mid ka mid ah tusaale ahaan ka mid ah la duldhigay maqalka ka timaada shaqada Yashuuca Blumenstock, kuwaas oo rabay in la ururiyo xog kaa caawin lahaa horumarka guide ee dalalka saboolka ah. More si gaar ah, Blumenstock doonayay in la abuuro nidaam si loo cabbiro Xoolo iyo fayo-qabka ah in la isku daro dhamaystirmo ee tirakoobka la dabacsanaan iyo inta jeer ee baadhitaan (Blumenstock 2014; Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . Dhab ahaantii, waxaan horey u tilmaamay shaqada Blumenstock si kooban Cutubka 1.
Si aad u bilowdo, Blumenstock iskaashi la bixiyaha ugu weyn ee mobile phone ee Rwanda. Shirkadda isaga bixiyo xusuusta macaamilka xawilaadda lacagta oo qarsoodiya ka ah oo ku saabsan 1.5 milyan oo macaamiil ah oo daboolaya dhaqanka ka 2005 iyo 2009. abuse ayaa ku jira macluumaad ku saabsan fariin kasta call iyo qoraalka sida waqtiga bilaabatay, duration, iyo meesha saxda ah juqraafi ah wacay iyo qof qaata. Ka hor inta aan hadalka bilaabin ku saabsan arrimaha tirakoobka, waxaa haboon farta ku fiiqaya in tallaabada ugu horeysay ee this waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah ugu adkaa ee. Sida lagu qeexay cutubka 2, ugu xogta raad digital waa geli karin in ay cilmi. Oo, shirkado badan oo waa Xaq laba labeyn in ay wadaagaan xogta ay sababtoo ah waa gaar ah; in uu yahay macaamiisha ay u badan tahay ma fileynin in diiwaanka ay la wadaagi-in-doonaa bulk la cilmi. Xaaladdan oo kale, cilmi qaaday talaabooyin taxadir in anonymize xogta iyo shaqadooda waxaa dusha a-dhinac saddexaad (ie, ay IRB). Laakiin, inkastoo dadaalka kuwan, xogta, kuwaas oo u badan tahay waa weli la aqoonsan karo oo ay u badan tahay ay ku jiraan macluumaad xasaasi ah (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) . Waan soo noqon doonaa su'aasha anshaxa kuwan Cutubka 6.
Xusuustaa Blumenstock xiiseynayay in lagu qiyaaso Xoolo iyo fayo-qabka. Laakiin, sifooyin kuwanu ma si toos ah diiwaanka call. In si kale loo dhigo, diiwaanka call kuwanu waa dhamaystirnayn cilmi this, feature a badan ee raad digital in la falanqeeyey si faahfaahsan cutubka 2. Laakiin, waxa ay u muuqataa badan tahay in diiwaanka call ku badan tahay in qaar ka mid ah warbixin ku saabsan Xoolo iyo fayo-qabka. Sidaas, hal hab oo waydiinaya su'aal Blumenstock ayaa noqon karaan: waa suurtogal in la saadaaliyo sida uu qof u jawaabi doonaan baadhitaan ku salaysan xogta ay raad digital? Haddii ay sidaas tahay, ka dibna by weydiinaya dhowr qof aan malayn karaa jawaabaha ee qof kasta oo kale.
Si taas loo qiimeeyo u mareysa, Blumenstock iyo cilmi-kaaliyayaasha ka Kigali Institute of Science iyo Technology yeedhay muunad ah oo ku saabsan kun macaamiisha telefoonka gacanta. Cilmibaadhayaasha ayaa sharxay himilooyinka mashruuca in ay ka qaybgalayaashu, weydiisatay ogolaansho ay u xiri jawaabaha sahanka diiwaanka call, ka dibna iyaga la weydiiyay su'aalo taxane ah si loo cabbiro xoolahooda iyo fayo-qabka, sida "Ma waxaad leedahay a radio? "iyo" Ma waxaad leedahay baaskiil? "(eeg Jaantuska 3.11 liiska qayb). Qaybgalayaasha oo dhan ee sahanka ayaa magdhow dhaqaale.
Next, Blumenstock isticmaalo habka laba tallaabo caadi ah ee sayniska xogta: injineernimada feature raacay by waxbarasho ee kormeersan. First, in talaabo injineernimada feature ah, waayo, mid kasta oo la waraystay, Blumenstock diinta diiwaanka call galay set ah sifooyinka ku saabsan qof kasta; saynisyahano xogta wac laga yaabaa astaamahaan "qaababka" iyo saynisyahano bulshada iyaga loogu yeedhi lahaa "doorsoomayaasha." Tusaale ahaan, qof kasta, Blumenstock xisaabiyaa tirada guud ee maalmood hawlaha, tirada dadka oo kala duwan qof ayaa la xidhiidhay, xaddiga lacag ku bixisay on dhignay, iyo wixii la mid ah. Aadka, injineernimada feature wanaagsan waxay u baahan tahay aqoonta goob cilmi. Tusaale ahaan, haddii ay tahay muhiim in la kala saaro wicitaanada gudaha iyo kuwa caalamiga ah (aan ka fili karto dadka caalamka ku yeedhi xagga noqon hantiilayaal), ka dibna waa in ay sameeyaan tallaabo injineernimada feature ah. cilmi-A la faham yar ee Rwanda oo aan ka mid noqon kara habkaani, ka dibna waxqabadka saadaal ah model ah oggolaan doono.
Next, in tallaabada waxbarashada ee kormeersan, Blumenstock dhisay model statistics in la saadaaliyo jawaabta tirakoobka ee qof kasta oo ku salaysan qaababka ay u. Xaaladdan oo kale, Blumenstock isticmaalo dhaca SKA 10-laab cross-ansaxinta, laakiin waxa uu ku isticmaali karo noocyo kala duwan oo habab kale tirakoobka ama mashiinka waxbarashada.
Sidaas sida wanaagsan ee ay u shaqeeyaan? Ahaa Blumenstock awoodo in la saadaaliyo jawaabaha tilmaamaan su'aalo sida "Ma waxaad leedahay radio ah?" Iyo "Ma waxaad leedahay baaskiil?" Isticmaalaya sifooyinka soo jeeda diiwaanka call? Sort ah. saxnaanta ee saadaasha waxay ahaayeen sare for nisbayn jireen qaar ka mid ah (Jaantuska 3.11). Laakiin, waxaa mar walba muhiim ah in la is barbar hab saadaasha adag ka dhanka kale ah oo fudud. Xaaladdan oo kale, ka duwan fudud waa in la saadaaliyo in qof kasta siin doonaa jawaab ugu badan. Tusaale ahaan, 97.3% waxa la sheegay lahaanshaha radio si haddii Blumenstock ayaa saadaaliyay in qof kasta sheegaan lahaa lahaanshaha radio uu heli lahaayeen sax ah 97.3%, taas oo la yaab leh la mid ah waxqabadka uu nidaamka dheeraad ah oo ku adag (97.6% sax). In si kale loo dhigo, oo dhan data sheeegateen oo lagula socdo kordhay saxnimada of saadaasha ka 97.3% ilaa 97.6%. Si kastaba ha ahaatee, waayo, su'aalo kale, sida "Ma waxaad leedahay baaskiil?", Saadaasha ku soo hagaagtay ka 54.4% ilaa 67,6%. More guud ahaan, Jaantuska 3.12 shows for nisbayn jireen qaar ka mid ah Blumenstock ma hagaajiyo badan ka baxsan oo kaliya samaynta saadaasha fudud aasaasiga ah, laakiin in sifooyin kale waxaa jiray qaar ka mid ah horumarinta.
Jaantuska 3.11: sax Saadaasha for model tirakoobka tababar la diiwaanka call. Natiijooyinka ka Table 2 of Blumenstock (2014) .
Jaantuska 3.12: Isbarbar dhigga ee saxnaanta saadaal for model tirakoobka tababar la diiwaanka call in saadaasha gundhigga fudud. Points yihiin wax yar ka gilgishay in ay ka fogaadaan xirmi; eeg Shaxda 2 of Blumenstock (2014) qiimaha saxda ah.
Halkaa marka ay marayso aad laga yaabaa in fikirka ah in natiijada kuwanu waa xoogaa niyad jab, laakiin kaliya hal sanno ka dib, Blumenstock iyo labada qof ee shaqaalaheeda-Gabriel Cadamuro iyo Robert On-daabacay warqad ah ee Science natiijooyinka la taaban karo ka fiican (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . Waxaa jiray laba sababo farsamo ugu weyn ee horumar ah: 1) waxay isticmaali habab dheeraad ah oo casri ah (ie, hab cusub inuu kasoo muuqdo injineernimada iyo model badan oo casri ah mashiinka waxbarashada) iyo 2) halkii ay isku dayaya in ay xawilaan jawaabaha su'aalaha sahanka shaqsi (tusaale ahaan, "Ma waxaad leedahay radio ah?"), waxa ay isku dayeen in ay xawilaan index a Xoolo kooban.
Blumenstock iyo asxaabta soo bandhigay waxqabadka ay hab laba siyaabood. First, waxay heleen in dadka in ay muunad, waayeen waxay ku sameeyaan shaqo wanaagsan ka heystaan ​​ka diiwaanka call (Jaantuska 3.14) saadaalinta Xoolahooda. Labaad, iyo weligiis sii muhiimsan, Blumenstock iyo asxaabtii muujisay in ay nidaamka karaan qiyaasta tayo sare leh ee qaybinta juqraafi Xoolaha ee Rwanda. More si gaar ah, ayay waxay ku isticmaaleen ay model waxbarashada mashiinka, kaas oo lagu soo tababaray ay muunad ah oo ku saabsan 1,000 oo qof, in la saadaaliyo maalka dhan 1.5 milyan oo qof oo ku nool diiwaanka call. Dheeraad ah, la data geospatial gundhig in xogta call (xusuustaa in xogta call ka mid ah goobta ku jiray munaaraddii dhow gacanta for call kasta), cilmi awoodin in la qiyaaso meesha saxda ah ee deggenaanshaha ee qof kasta. wada Habeynta labadan qiyaasaha, cilmi soo saaray qiyaasta qaybinta juqraafi Xoolo macmiilka at granularity da'ayeen aad u wanaagsan. Tusaale ahaan, waxay ku qiyaasi jirtay Xoolo celceliska mid kasta oo kamid 2148 unugyada Rwanda ee (unit yar maamul ee dalka). Kuwani qiimaha Xoolo saadaaliyay ahaayeen si granular waxay ahaayeen adag tahay in la hubiyo. Sidaas daraaddeed, cilmi darka natiijada ay soo saaraan qiyaasaha Xoolo celceliska 30 degmo Rwanda ee. Qiyaasta heer degmo Kuwanu waxay si xoog leh oo la xiriira qiyaasaha ka soo dahab heerka baadhitaan dhaqanka, Rwanda Dadka iyo Caafimaadka Survey (Jaantuska 3.14). Inkasta oo qiyaasta ka labada ilo ahaayeen la mid ah, qiyaasaha ka soo Blumenstock iyo asxaabtii ahaayeen in ku dhow 50 jeer ka jaban oo 10 jeer ka dhakhsi (marka kharashka ku qiyaasay in la eego kharashka variable). Hoos u weyn ee qiimaha ka dhigan tahay in halkii lagu ordo sano-Yar kasta waa caadiga ah ee Daraasaadka Dadka iyo Caafimaadka ee hybrid of sahan yar oo ay weheliso xogta raad digital weyn la ordi yaabaa bil kasta.
Jaantuska 3.13: Schematic of Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . data Call shirkadda telefoonka waxaa diinta shax la mid isku xigta ee qof kasta oo ka mid column for feature kasta (ie, variable). Next, cilmi dhisay model waxbarasho ee kormeersan in la saadaaliyo jawaabaha sahanka qofka by furta feature. Markaas, model ah waxbarashada ee kormeersan waxaa loo isticmaalaa in lagu tirin jawaabaha sahanka qof walba ka. In jiritaan, cilmi isticmaalaa jawaabaha ee ku saabsan mid ka mid kun oo qof si ay u tirin maalka ku saabsan hal milyan oo qof. Sidoo kale, cilmi meesha saxda ah ee joogitaanka qiyaasay oo dhan 1.5 milyan oo qof oo ku salaysan meelaha ay ku baaqay in ay. Marka labadan qiyaasta ayaa la isku daro ee Xoolo lagu qiyaasay iyo meesha lagu qiyaasay deggan-natiijooyinka ahaayeen mid ah qiyaasaha ka deegaanka iyo Survey Health, sahanka dhaqanka dahab-taaga (Jaantuska 3.14).
Jaantuska 3.14: Natiijooyinka ka Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . At heerka shakhsiga-, cilmi-waxay ahaayeen awoodaan inay sameeyaan shaqo macquul ah saadaalinta qof Xoolo ka diiwaanka call ay. Qiyaasta Xoolo-kuwaasi oo ay ku salaysan qiyaasta heer-gaarka ah ee xoolo iyo meesha aad deggan-natiijooyinka heer degmo ahaayeen mid ah natiijada ka soo Dadka iyo Caafimaadka Survey, sahanka dhaqanka dahab-taaga.
Gebogebadii, Blumenstock ee maqalka weydiinaya hab weheliso xogta sahanka la xogta raad digital in ay soo saaraan qiyaasta u dhigma qiyaasaha sahan dahab-caadiga ah. Tusaale ahaan Tani gaar ah sidoo kale caddayn qaar ka mid ah ganacsiga-offs inta u dhaxaysa weydiinta maqalka iyo hababka sahanka dhaqanka. First, qiyaasaha weydiinaya maqalka ahaayeen kuwo ka badan waqtiga, xooga ka jaban, iyo granular dheeraad ah. Laakiin, dhinaca kale, waqtigan, ma jiro a sal teori xooggan ee noocan oo kale ah la duldhigay maqalka. Taasi waa, waxan keliya tusaale ahaan ma muujiyaan marka ay ka shaqeyn doonaan iyo marka aan doono. Dheeraad ah, hab la duldhigay maqalka uusan weli haysan siyaabo fiican in tiradeeda la hubin agagaarka qiyaasaha ay. Si kastaba ha ahaatee, weydiinta maqalka ayaa xidhiidh qoto dheer in saddex meelaha waaweyn ee post-stratification statistics-model-salaysan (Little 1993) , imputation (Rubin 2004) , iyo qiimaysay-banaan yar (Rao and Molina 2015) kolba sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in horumar Doono noqon degdeg ah.
weydiinta maqalka socota wadadii aasaasiga ah in la talo galay kara in xaaladda gaarka ah. Waxaa jira laba ah maaddooyinka iyo laba talaabo. Labada waxyaabaha yihiin 1) dataset a digital raad waa ballaaran laakiin khafiif ah (in uu yahay, waxa uu leeyahay dad badan oo laakiin aan macluumaadka aad u baahan tahay oo ku saabsan qof kasta) iyo 2) baadhitaan waa cidhiidhi ah, laakiin qaro weyn (in uu yahay, waxa uu leeyahay dhowr qof oo kaliya, laakiin waxa ay leedahay macluumaad ah in aad u baahan tahay oo ku saabsan dadka). Markaas, waxaa jira laba talaabo. First, waayo, dadku waxay in labada ilo xog, dhisaan model waxbarashada mashiinka in uu isticmaalaa xogta raad digital in la saadaaliyo jawaabaha sahanka. Next, isticmaalaan in model waxbarashada mashiinka si tirin jawaabaha sahanka ee qof walba ee xog raad digital. Sidaas darteed, haddii ay jirto su'aal qaar ka mid ah in aad rabto in aad weydiiso in ay dad badan oo, raadi xog raad digital ka dadka in loo isticmaali karo in la saadaaliyo in ay jawaab kuwa.
Isbarbar Blumenstock ee isku day koowaad iyo labaad ee dhibaatada sidoo kale muujinayaa cashar muhiim ah oo ku saabsan guurka ka Zaman labaad si waji Zaman saddexaadna wuxuu u soo tilmaamaan cilmi: bilowgii ma aha dhamaadka. Taasi waa, marar badan, hab ugu horeysay ee ma noqon doono ciyaaryahanka ugu fiican, laakiin haddii cilmi sii shaqada, wax wanaagsan ka heli kartaa. More guud ahaan, marka la qiimeeyo habab cusub si cilmi bulshada ee da'da digital, waxaa muhiim ah in la sameeyo laba qiimeyn oo kala ah: 1) sida ugu wanaagsan ee tani u shaqaysaa hadda iyo 2) sida ugu wanaagsan ee aad u aragto in this mustaqbalka shaqeeyaan sida muuqaalka xogta isbedel iyo sida cilmi-sooco, si dhibaatada fiiro gaar ah. Inkastoo, cilmi waxaa loo tababaray in ay sameeyaan nooca hore ee qiimaynta (sida wanaagsan waa gabal gaar ah cilmi), labaad inta badan waa ka muhiimsan.